C/qaadir Sheekh Cali Diini oo beeniyay eedeymaha loo jeedinaayo dowladda federaalka Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/qaadir Sheekh Cali Diini oo beeniyay eedeymaha loo jeedinaayo dowladda federaalka Soomaaliya
Wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Jeneraal C/qaadir Sheekh Cali Diini ayaa si kulul u beeniyay hadalkii dhawaan kasoo yeeray madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas, kaas oo ahaa in ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka ay ka qeyb qaateen dagaalka Gaalkacyo.
Wasiir Diini oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan jirin wax ciidan ah oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ka qeyb galay dagaalka u dhaxeeya maamulada Galmudug iyo Puntland, kaas oo mudooyinkii ugu dambeysay ka socday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
“Waxaa maalmihii ugu dambeysay dhaleeceyn kasoo yeeraysay maamulka Puntland, oo ay sheegayeen in ciidanka xoogga dalka ay ka qeyb qaadanayaan dagaalka Gaalkacyo, waxaan rabaa inaa halkaan ka caddeeyo inaysan jirin wax ciidan ah oo ka tirsan kuwa xoogga dalka oo ka qeyb qaadanaya ama hore uga qeyb qaatay dagaalka Gaalkacyo, warkaas waa waxba ka jiraan aan sal iyo raad toona lahayn” Sidaas waxaa yiri Jeneraal C/qaadir Sheekh Cali Diini.
Dhinaca kale, waxa uu wasiir Diini ugu baaqay dhinacyadda ay xiisadda dagaal ka dhaxeeyso ee maamulada Galmudug iyo Puntland inay dagaalka joojiyaan, una turaan shacabka maatida ah ah, islamarkaana wixii khilaaf ah ay miiska wada-hadalka ku dhameeyaan.
Si kastaba ha ahaatee, hadalka wasiirka gaashaandhiga ee xukuumadda Soomaaliya C/qaadir Sheekh Cali Diini ayaa kusoo beegmaya xilli dhawaantaan madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas uu dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay inay qeyb ka tahay dagaalada ka soconaaya magaalada Gaalkacyo, islamarkaana ay ciidankeeda ka dhinac dagaalamayaan kuwa Galmudug.